फिल्ममा नभएपनि एक्कासी ‘छक्कापञ्जा–३’ को छायांकन स्थलमा किन पुगिन बर्षा राउत ? यस्तो रहेछ रहस्य (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentफिल्ममा नभएपनि एक्कासी ‘छक्कापञ्जा–३’ को छायांकन स्थलमा किन पुगिन बर्षा राउत ? यस्तो रहेछ रहस्य (भिडियो)
फिल्ममा नभएपनि एक्कासी ‘छक्कापञ्जा–३’ को छायांकन स्थलमा किन पुगिन बर्षा राउत ? यस्तो रहेछ रहस्य (भिडियो)
June 19, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय नायिका बर्षा राउत यतिबेला ‘चौका दाउ’ को छायांकनमा व्यस्त छिन् । यही फिल्मको एउटा गीतको छायांकनमा नायिका राउत मध्ये रातिसम्म पनि आफ्नो पालो नआएकाले पर्खेर बसेकी थिईन । उनले आफूले लगाउनुपर्ने ड्रेस–अपको कारण छायांकनमा केही ढिला भएको बताईन् ।
‘छक्कापञ्जा’देखि दीपक र दीपासँग लगातार काम गर्दै आएकी बर्षा ‘छक्कापञ्जा–३’ मा भने दोहोरिएकी छैनिन् । उनले आफूलाई सुहाउखदो क्यारेक्टर नभएकाले फिल्ममा नदोरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिन् । तर, बर्षा उक्त फिल्ममा नभएपनि उनका प्रेमी सञ्जोग कोइराला भने सो फिल्ममा अभिनय गर्दैछन् । उनले सञ्जोगलाई भेट्न छायांकन स्थलमा गएको पनि खुलासा गरिन् । उनले सञ्जोगले आफूलाई मेकअपको एउटा सामान गिफ्ट दिएको समेत बताईन् ।
नम्रताको स्वभाव राम्रो लागेको भन्दै दीपकले गरे यस्तो बयान (भिडियो)
अशोकले आफ्ना बाबु–आमालाई मलेसियाबाट ल्याईदिए यस्तो उपहार, उनी भन्छन् यो त मेरो कर्तव्य हो (भिडियो)